24 ny tamin’ny faritra Atsinanana no voafantina ary nahazo hafatra tamin’ny finday avokoa izy ireo, ankoatra azy izay nasaina nanao ny “enquête de moralité” tany Toamasina, ary olona no niteny taminy hoe miakara haingana any Antananarivo, raha ny fanazavany. Nony tonga teto dia efa nivoaka ny lisitra, ka izany ve no atao hoe fampihavanana, hoy izy. Anisan’ny nanome tànana ny fampihavanana izahay, kanefa maninona no ahilikilika, hoy hatrany ny tenany. Jeneraly, kolonely, minisitra teo aloha,… ny ankamaroan’ireo voafantina. Olona efa mpikamban’ny FFM teo aloha ny 90%-n’ny lisitra raha ny fanambarany, kanefa ireo anisan’ny olona tsy nahavita izany fampihavanana izany, fa lany fotsiny ny volam-panjankana.
Mifono valifaty politika?
Tsy sanatria fitia te hanakorontana na koa hanakiana be fahatany, fa maro ny resaka mivoaka momba ny ambadika politika ao anatin’ny fananganana ny CFM amin’izao fotoana izao, ka mila hahitsy dieny ety am-piandohana raha fihavanana sy filaminana tokoa no katsahina. Re avy amin’ireo olona isan’ny nirotsaka hofantenana ao anatin’ny CFM ihany mantsy ny fisian’ny resaka fanomanana valifaty politika ao anatiny, saingy takonana fotsiny ao anatin’ny hoe fampihavanam-pirenena. Araka ny loharanom-baovao iray, dia efa mandeha sahady ny resaka hanilihana kandida iray amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho avy, ka olona isan’ny nifandrina taminy no homena vahana sy hatao maro an’isa ao anatin’io Filan-kevitry ny fampihavava Malagasy io. Isan’ny manamarina izany ny loko politikan’ny lohandohan’ny mpisorona ao anatin’ny Komity mpifantina ny CFM sy ireo mety ho voatendry, raha ny fahitan’ny olona isan’ny nandrotsaka ny antontan-taratasiny, izay mahatsiaro ho voahilika sahady, ary nanamafy ny efa nambaran-dRakotomalala Henri momba ireo olona ao anatin’ny lisitra satria efa fantampantatra ny fironan-kevitra ananan’ireo tafiditra ao anaty lisitra.